Ny toetra mampiavaka ny Huawei Nova 5 Pro dia hita ao amin'ny Geekbench | Androidsis
Huawei Nova 5 Pro: fanamarihana sasantsasany izay nohamafisin'i Geekbench
Eo am-piandrasana ny Huawei Nova 5 andiany famoahana andiany, Misy antsipiriany maromaro izay efa fantatsika momba ireo fitaovana mandrafitra azy, ary mazava ho azy, raha amin'ity herinandro ity efa tafaporitsaka tsy hiteny intsony?
El Vaovao 5 Pro io no variant mahery indrindra antenaina amin'ity firazanana ity. Nolazaina fa mety hampitaovana ny Kirin 980, izay hahaliana ny mahita azy. Na izany aza, tatitra hafa azo itokisana kokoa soso-kevitra fa ny Kirin 810, SoC izay mbola tsy nambaran'ny mpanamboatra azy, dia hisantatra amin'ny finday, araka ny soso-kevitr'i Geekbench amin'ity indray mitoraka ity.
Geekbench dia mamoaka ny Nova 5 Pro eo amin'ny lampihany
Huawei Nova 5 Pro ao amin'ny Geekbench
Un Huawei terminal mitondra ny anarana kaody 'SEA-AL10' Efa voasoratra ao amin'ny tahiry Geekbench. Inoana fa io no voalaza etsy ambony Nova 5 Pro, satria ny toetrany sy ny mombamomba azy dia mifanaraka amin'ny antenaina mihodina manodidina azy.
Araka ny faritan'ny lisitra farafaharatsiny, mandeha ny smartphone Android 9 Pie toy ny rafitra miasa, izay hosaronan'ny sosona EMUI tsirairay avy amin'ny orinasa. Ity ilay OS andrasana ao aminy izay tsy mahagaga mihitsy; tadidio fa efa fitsipika ny ampiasain'ny mpanamboatra azy eo amin'ny faritra afovoany vaovao tsy misy fetra.
Ny lisitra TENAA an'ny Huawei Nova 5i dia havaozina miaraka amin'ny sariny
Saingy tsy izany ihany. Milaza amintsika izany koa i Geekbench ny Nova 5 Pro dia misy RAM 8 GB, fahaiza-manao izay mifanitsy amin'ny an'ny finday avo lenta avo indrindra, toy ny an'ny Huawei P30 Pro. Ho fanampin'izay, raha ny momba ny processeur dia ny antsipiriany ihany no ampiasainy fa misy ARM misy core valo sy 1.8 GHz ny famantaranandro famantaranandro. Ity no Kirin 810, sehatra finday manaraka an'ny orinasa izay ho hita ao amin'ny vaovao tapaky ny volana isan-karazany Premium amin'ny katalaoginy, na dia tsy maintsy hamafisina aza izy io, ary amin'ny 21 Jona dia ho vitantsika izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Huawei Nova 5 Pro: fanamarihana sasantsasany izay nohamafisin'i Geekbench
Xiaomi Mi CC9 sy CC9e, ireo smartphone roa vaovao sy ho avy an'ny mpanamboatra sinoa tafaporitsaka izao
Izany no fanandramana nataon'i Oukitel ny kalitaon'ny terminaln'izy ireo